छोराको आगलागीमा परि मृ*त्यु भएको ९ दिनपछि घाइते बुवाको पनि म*त्यु – Online Nepal
छोराको आगलागीमा परि मृ*त्यु भएको ९ दिनपछि घाइते बुवाको पनि म*त्यु
April 29, 2020 292
बागलुङ, १७ वैशाख – आगलागीमा परी गम्भीर घाइते हुनुभएका जिल्लाको बरेङ गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष पूर्ण खनालको निधन भएको छ । काठमाडौँस्थित कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचाररत खनालको आज बिहान निधन भएको गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
छिमेकी गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका–४ शान्तिपुर बजारमा रहेको शर्माको पसलमा यही वैशाख ८ गते आगलागी हुँदा खनाल, उहाँकी श्रीमती रुपा र छोरा सञ्जय घाइते हुनुभएको थियो । सोही घटनामा परी शर्माका कान्छा छोरा १५ वर्षीया समीरको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो ।
खनालसहित घाइते तीनै जनालाई सोही दिन पाल्पाको मिसन अस्पताल हुँदै थप उपचारका लागि काठमाडौँ पु¥याइएको थियो । “उहाँको अवस्था सुधारोन्मुख थियो, अकस्मात मुटुमा समस्या आई निधन भएको खबर आयो”, अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, “शव परीक्षण प्रतिवेदनपछि सबै जानकारी आउला ।”
खनालकी श्रीमती र छोरा सञ्जयको अवस्था भने सुधारोन्मुख छ । आगलागीका कारण पसलसहित घर पूर्णरुपमा क्षति भएको छ । खनाल सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।(रासस)
Prevकरोडौंको हृदयमा बसेका इरफानलाई २० जनाको उपस्थितीमा अन्तिम विदाइ(हेर्नुहोस् तस्वीर)
Nextकतारले दिएका सहायता सामग्री लिएर नेपाल आइपुग्यो जहाज
लकडाउन सरकारलाई होइन, जनताको जीवनका लागि हो :प्रधानमन्त्री ओली (विशेष अन्तर्वार्ता)
घर निर्माण गर्दा कसरी जो’गाउने पैसा ? पढ्नुहोस् बिज्ञका सल्लाह !
नेपालमा पहिलोपटक डाक्टरलाइ पनि कोरोना संक्रमण, काठमाण्डौ र ललितपुरमा थपिएका नयाँ सङ्क्रमितको पहिचान खुल्यो !